🥇 ▷ Khariidadaha Google ayaa horumarinaya is-dhex-galka Wadada oo leh lakab dheeri ah ✅
Khariidadaha Google ayaa horumarinaya is-dhex-galka Wadada oo leh lakab dheeri ah
Muuqaalka Wadada Waxay naga dhex jirtay sannado badan. Adeeggan Google ayaa la cusbooneysiiyay waqti ka dib haddana wuxuu u shaqeeyaa qaab aan caadi aheyn. Waxaa laga heli karaa desktop-ka iyo sidoo kale mobiilka, inkasta oo nidaamka dambe aan si wanaagsan loogu fulinin dalabka. Si loo muujiyo waddo leh Muuqaal Wadada laga soo qaatay mobilada waxa lama huraan ahayd in la ogaado meeshuu ku dhuunto ee shaqada ee adeegsiga Khariidadaha Google. Waxaan ka wada hadalnay sidii hore iyadoo uga mahadcelineysa cusbooneysiinta cusub ee timid Khariidadaha Google ee Android. Hadda waa macquul in la arko Muuqaalka Wadada iyadoo hal dhagsii shaashadda.
Midkii ugu dambeeyay Cusbooneysiinta Google Street View Waxay noogu reebtay horumar xagga badhanka ah oo lagu taabto shaashadaha taabashada. Hada isticmaalkiisu waa ka sahlan yahay aaladaha moobiilka, laakiin had iyo jeer ma fududa in la furo ama la helo hawsha. Hada arrimuhu si isku mid ah ayey isu beddelaan, maxaa yeelay Google ayaa a lakabka ayaa si gaar ah loogu goglay qaybtan.
Muuqaalka Google Street wuxuu horey u leeyahay lakab u go’an khariidadaha Google
Dhexgalka qaybtani ee nooca desktop-ka ayaa sanado badan aad u fiicnaa oo dareensan. Ma dhihi karno isku mid ayaan ahayn Wadada Muuqaalka Android, sababta oo ah marar badan ayaa dalabka loo qoondeeyay ama raadin buuxda oo shaqadi ka dhexjirto qaybaha kala duwan ee dalabka ayaa loo baahnaa.
Hadda Khariidadaha Google ayaa la cusbooneysiiyay oo ay ku jiraan Muuqaalka Wadada Lakab Waqtigaan waxaad furi kartaa Khariidadaha Google, dhagsii sumadda lakabyada oo dooro Muuqaalka Wadada. Lakabyadaani waa kuwa muujinaya xasilloonida, taraafikada ama khariiddada waddooyinka magaalooyinka. Lakabka cusub ee Muuqaalka Wadada waad awoodaa xoogga saar hawshan iyo indhahaaga saar dariiq kasta ama wado kasta oo gaariga Google uu maray.
Khariidadu waa mid aad isweydaarsi u leh aadna u faa’iido badan, maxaa yeelay waxaad arki kartaa dhammaan waddooyinka hoosta ka xariiqa ee midabka buluuga ah ee casriga ah ee aan ku aragno istiraatiijiyadda Muuqaalka Wadada. Waxaad ku dhaweyn kartaa khariidada oo waad ku dhex socon kartaa sidii aad rabto. Markaad hesho wadada aad rabto inaad ku aragto waa inaad dhag ku dhigtaa Muuqaalka Wadada ayaa talaabo qaadi doonta.
Waa mid ka mid ah astaamaha ugu xiisaha badan ee Google ay hirgalisay bilihii la soo dhaafay. Waxay si weyn u fududaynaysaa adeegsiga tan qalab aad u awood badan oo Khariidadaha Google leeyahay raadinta iyo helitaanka meelaha.